Guddida Anshaxa Doorashooyinka Oo Qoraal Ka Soo Saaray Xubin Uu Murrashaxa KULMIYE Magacaabay
Guddida Anshaxa Doorashooyinka Oo Qoraal Ka Soo Saaray Xubin Uu Murashaxa Kulmiye Magacabay
Hargeysa (Dhamays) – Guddida Anshaxa Doorashooyinka, ayaa qoraal ka soo saaray xubnin shaqaale dawladeed ah oo uu murrashaxa KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdu u magacaabay inuu ka mid noqdo Guddida Diyaarinta iyo Maamulka muraaqibiinta xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa guddi ka kooban shan xubnood oo uu Guddoomiye u yahay siyaasiga Cabdicasiis Maxamed Samaale u magacaabay inay noqdaan Guddida diyaarinta iyo maamulka muraaqibiinta xisbiga KULMIYE, waxaanna guddidaas xubin ka ah Mr. Cabdikariin Axmed Maxamed (Xinif) oo ah Agaasimaha Maamulka iyo Lacagta ee Komishanka La-dagaalanka Heer Qaran ee HIV/AIDS-ka.
“Ujeeddo: Magacaabista Guddida Diyaarinta iyo Maamulka Muraaqibiinta Xisbiga KULMIYE.
Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan – Guddoomiye-ku-xigeen
Ibraahim Daahir Dubbad
Guddidani waxa ay masuul ka yihiin diyaarinta, tababarka iyo maamulka muraaqibiinta iyo goob-joogayaasha Xisbiga KULMIYE. Waxa kale oo ay masuul ka yihiin adeegsiga farsamada cariga ah ee IT-ga iyo xog-ururinta (Data Collection),”ayaa lagu yidhi qoraalka uu ku saxeexan yahay Guddoomiyaha ahna murrashaxa Madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi.
Hasa yeeshee, Guddida Anshaxa Doorashooyinka, ayaa qoraal ay ku socodsiiyeen Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Maanta oo taariikhdu tahay October 2017, waxa ay kaga dalbadeen in tallaabada ku habboon ee anshax-marineed laga qaado Mr. Cabdikariin Maxamed Axmed (Xinif) oo ah Agaasimaha Maamulka ee Komishanka La-dagaalanka HIV/AIDS-ka ee qaranka Somaliland.
Qoraalka Guddida Anshaxa oo faahfaahsan waxa ay u qornyad sidan;
Ujeeddo: Tallaabo Anshax-marineed
Guddoomiye, annaga oo tix-raacayna digreetada Madaxweyne ee JSL/M/WM/222-5062/092017 ee reebannaanta u adeegsiga hantida qaranka doorashooyinka ee ka reebaysa shaqaalaha dawladdu in aanay ka qaybgelin ololaha xisbiyada ee doorashada Madaxweynaha ee soo socota.
Markii aannu helnay liiska guddida soo xulista goob-joogayaasha (muraaqibiinta) xisbiga KULMIYE oo uu ku jiro, xubina ka yahay Cabdikariin Maxamed Axmed oo ah Agaasimaha Maaliyadda ee Komishanka La-dagaalanka AIDS-ka.
Markaan eegnay qodobka 12aad, farqadiisa 2aad ee xeerka Hab-dhaqanka Doorashooyinka ee xisbiyada oo ka reebaya shaqaalaha dawladda inay ku dhex milmaan hawlaha xisbiyada waqtiga doorashada.
Guddi ahaan waxa aannu soo jeedinaynaa in aad Guddoomiye ahaan aad ka qaado tallaabada anshax-marineed ee ku habboon, si loo ilaaliyo wixii lagu heshiiyey iyo amarka Madaxweynaha ee arrintaas la xidhiidha,” ayaa lagu yidhi qoraalkan oo ay ku saxeexan yihiin Guddoomiyaha Guddida Anshaxa marwo Sucaad Ibraahim Cabdi iyo Xoghayaha Guddida Anshaxa Mr. Cabdiqaadir Cismaan Xirsi.
Previous: Sheekh Aadan-Siiro Oo Su’aal-geliyey Waxa Laamaha Amnigu Uga Hadli Waayeen Gaadiid Lagu Gubay Badhtamaha Hargeysa
Next: Somaliland Iyo Soomaaliya Oo Guddi U Saaray Soo Wareejinta Maamulka Hawada